Nokia dia hanangana Smart TV tsy ho ela ao India | Androidsis
Eder Ferreño | | Fitaovana Android, Fitaovana hafa
Maromaro hatrany ny marika amin'ny Android miditra amin'ny tsenan'ny Smart TV. Nahita orinasa toa an'i Xiaomi na vao haingana OnePlus namoaka ny fahita lavitra izy ireo. Tsy izy ireo ihany no marika amin'io lafiny io, satria misy marika vaovao manampy an'ity lisitra ity, izay hahagaga ny maro. Nokia ity.
Miasa ny orinasa handefa ny fahitalavitra Smart voalohany voalohany any India fotoana fohy. Nokia Smart TV no anarana nomena ny fahita lavitra an'ity orinasa ity, izay antenaina hatao ofisialy tsy ho ela. Fandefasana izay hidiran'izy ireo amin'ny sehatry ny tsena vaovao, izay ahitan'izy ireo fa misy ny mety.
Amin'ity tranga ity, Nokia niara-niasa tamin'ny Flipkart, fivarotana an-tserasera lehibe indrindra any India, tamin'ity fanombohana ity. Amin'izao fotoana izao dia manana antsipiriany vitsivitsy momba izany izahay, na dia fantatra aza fa hampiasa ny feo JBL izy io. Heveriny fa voalohany ny fidiran'ireo orinasa roa ao amin'ity tsena ity.
Tsy misy isalasalana, atahorana ho an'ny orinasa izany. Amin'ny lafiny iray, lafiny hafa amin'ny tsena amin'ny an'ny telefaona izy io, ankoatry ny fidirana amin'ny tsena hafa tanteraka, toa an'i India. Ka vinavinan'ny tsirairay raha te hahita fahombiazana izy ireo, indrindra raha heverintsika fa somary tototry ity tsena ity.
Tsy mbola nomena izy ireo amin'izao fotoana izao daty hanombohana ity Nokia Smart TV ity. Ny zava-drehetra dia manondro fa ho avy tsy ho ela amin'ny fotoana hanehoana azy io, saingy tsy mbola mahalala na inona na inona isika hatreto. Tsy isalasalana fa mety ho fanombohana lehibe ho an'ny orinasa izany. Fanontaniana iray hafa ny hoe hanangana any Eropa ve ity TV ity?
Araka ny hitanao dia misy valiny vitsivitsy tsy hita amin'ity resaka ity. Angamba tsy ho ela dia hanana ny valiny rehetra isika momba ity Nokia Smart TV ity, izay mampanantena ny tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha. Noho izany, hitandrina ny vaovao momba ny fahatongavany eny an-tsena isika, izay azo antoka fa tsy ho ela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Nokia hanangana Smart TV any India atsy ho atsy